Kubuyekezwe uhlu lwemodeli yamata omgwaqo we-TPE ngoMashi 2021
Thina iShaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd igxile ekwenziweni kwamata omoto. Singabuyekeza amamodeli omata bezimoto ngokushesha okukhulu. Uma amamodeli wemoto owadingayo engafaki kuhlu lwethu lwemodeli, sicela uxhumane nathi ngasikhathi sinye, futhi singayiqeda ngokushesha, futhi wamukelekile uma une-3D laser ...
Konke Okudingeka Ukwazi NgeMat Floor Mats
Lapho sidinga ukuthenga amacansi ephansi emoto, ungamthola kanjani umkhiqizi omuhle kakhulu? Ungasesha kuGoogle nge "car mats factory", lapho-ke ungathola amawebhusayithi amaningi, futhi udinga ukwahlulela ukuthi iyiphi ifektri yemata yemoto oyidingayo, futhi nokuhlola izinto zemethi yemoto yilokho okudingayo. Kukhona umlingani ohlukile onomusa ...
Yimaphi amacansi emoto anomusa okulula ukuwahlanza?
Izinto ezahlukahlukene nezakhiwo amacansi emoto anezindlela ezahlukahlukene zokuwasha. Ubulukhuni bokuwashwa buhlukile, omata bezimoto manje bavame ukuba nalezi zinto ezihlukile: ukhaphethi, amacansi emoto enjoloba, amacansi emoto e-PVC namata wezimoto ze-TPE / TPR. Ake sichaze ukuthi yini ehlukile kwi-washin ...
Ungawasebenzisa kanjani amacansi wakho wemoto iminyaka engama-20 ubude?
Lapho uba ngumama, ungahle umatasa nsuku zonke ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu emndenini unakekelwa kahle. Awunaso isikhathi sokuhlanza igumbi, futhi awunaso isikhathi sokuhlanza imoto yakho. Isikhathi sisho yonke into, awukwazi nokulinda umzuzu, udinga ukuthola indlela yokuzipha ikhefu. E ...
Ungayikhetha Kanjani iMats Yezimoto Yakho?
Lapho uthenga iMoto entsha, udinga ukuthenga amacansi emoto ngasikhathi sinye.We Huawo auto parts Co, Ltd sinikeza izinhlobonhlobo zomata bemoto nesiqu somuthi ukuvikela ingaphakathi lemoto yakho.Sizokwethula ukuthi imaphi amakesi aphansi kakhulu kwakho. Yimaphi amacansi emoto alingana nemoto yami? Uma uvakashela yethu thina ...
Zingaki izinhlobo zemoto esinazo?
IHuawo Auto Parts Co., Ltd iyifektri yama-TPE car mats ekhiqize isikhunta esiningi kumata bemoto nesiqu somthi. Sinezimata zemoto kanye ne-trunk mat isikhunta seToyota, Honda, Land Rover, BMW, Jeep, Porsche, Mercedes-Benz, Chevrolet, Cadillac, Ford, Nissan, Lexus, Audi, Das Auto, Volvo, Jaguar, KIA, Mazda, Tesla , Mitsubishi Motors, Bui ...
Kungani izinto ze-TPE zingasebenzisa eMbonini Yezimoto
Kusukela ezihlalweni zasendulo zemoto nezinqola kuya ezimotweni zesimanje, amathuluzi abantu okuhamba abelokhu ethuthuka. Ukuze ube Nokunethezeka ngokwengeziwe, ifektri yamata weemoto ze-TPE ikhiqize amacansi emoto we-TPE avele emphakathini. I-Thermoplastic elastomer TPE yenziwa ngezinto eziyisisekelo ze-SEBE ezihlanganiswe namafutha amhlophe nokunye ...
I-TPE car mat material: yiziphi izinzuzo ze-TPE car mats material?
I-TPE empeleni uhlobo olusha lwezinto eziluhlaza ezinokunwebeka okuphezulu namandla acindezelayo. Ngokuya nge-ductility yokukhiqiza nokucubungula izinto ze-TPE zingakhiqizwa ukwenza ukubukeka okuhlukile. Manje, amacansi waphansi we-TPE asevele abe enye yezinto ezisetshenzisiwe emkhakheni wokukhiqiza futhi ...
Hlobo luni lomata bezimoto abadingwa abathanda izwe eliwela izwe lonke!
Omata bezimoto babalulekile ekushayeleni kwansuku zonke, ezweni eliwela izwe futhi kuthatha umthwalo wokulwa nokushibilika nokuvikela umzimba wemoto.Kodwa indwangu yesikhumba yemoto yendabuko umphumela ongangenwa ngamanzi uvamile, awunakuthwala amanzi anodaka lapho unqamula izwe Ngasikhathi sinye, ukuguquguquka kwezinto kubi, hhayi ...
Omata bezimoto ze-TPE yizinto ezenzeka ngokuzayo
Omata bezimoto bajwayelekile kuwo wonke umnikazi, noma ngabe uvela esitolo sezimoto i-4S njengesipho, noma uzithengele, amacansi ezimoto ayindawo yokuqala yezimoto oyidingayo. Njengeqoqo lezinto ezingangenwa ngamanzi, ezingadli ukungcola, anti-ukushelela, imoto yokuvikela komunye wemethi yaphansi yemoto, emakethe yezimoto ...
Thinta eduze umhlaba nsuku zonke, ukuthi ungayihlanza kanjani ihabhu lezimoto?
Imoto iqale njengethuluzi lokuhamba, ngakho-ke isebenza ngaphandle kwansuku zonke, kunezinhlobo eziningi zemvelo yomhlaba, ezinye izindawo zinodaka oluningi noma uthuli, zingcolile kakhulu, ngakho-ke ihabhu lemoto lingcolile kakhulu, asikwazi ukuma ke-ke ungayihlanza kanjani ihabhu lezimoto? Vumela uShaoxing Huawo Auto Parts Co ....
Ungabukhetha kanjani ubukhulu bamata waphansi wemoto?
Manje cishe wonke umndeni unemoto, futhi wonke umnikazi wemoto uyayithanda imoto yakhe.Ukuze ugcine imoto ihlanzekile, bazothenga zonke izinhlobo zezinsiza zemoto, amacansi ezinyawo zemoto abalulekile, kepha ukushuba kwamata waphansi wemoto nakho ehlukile, ngakho-ke yikuphi ukushuba okufanelekile? Omata bezinyawo zezimoto bayahluka ...
Ucingo: + 86-575-83008585
Kubuyekezwe uhlu lwemodeli kamata we-TPE ngoMashi ...
Konke Odinga Ukukwazi Ngemoto F ...